Xirfadaha: Agaasimaha Horumarinta - Cunnooyinka Lugaha
Xirfadaha: Agaasimaha Horumarinta
Metro Meals on Wheels waxay doonaysaa inay ku darto shaqsi firfircoon si uu ugu biiro kooxdooda sida Agaasimaha Horumarinta. Musharraxa la doonayo wuxuu lahaan doonaa aqoon aruurinta isagoo leh karti uu ku hawlgalo deeq -bixiyeyaasha cusub iyo wakiilka taageerayaasha muddada dheer. Shakhsiga la doorbidayaa wuxuu lahaan doonaa ugu yaraan saddex sano oo waayo -aragnimo horumarineed ah iyo ballanqaad xooggan oo ah inuu ka caawiyo ururku inuu hormuud ka noqdo barnaamij hoggaamineed oo adag. Shakhsigani wuxuu kaloo lahaan doonaa awood suuqgeyn xoog leh oo leh rikoor raad -raac oo wanaagsan oo ka -qaybgalinta bulshada isagoo adeegsanaya fikradaha casriga ah ee qasabka ah.
Agaasimaha Horumarintu wuxuu mas'uul ka yahay dhammaan aruurinta lacag aruurinta, isgaarsiinta, iyo waxqabadyada iskaa wax u qabso oo dhan loogu talagalay in lagu dhiso taageero samafal oo adag oo joogto ah oo loogu talagalay hawlgalka Metro Meals on Wheels. Doorkan wuxuu mas'uul ka yahay horumarinta, maamulka iyo maareynta bixinta shakhsiga, hadiyadaha waaweyn, dhacdooyinka, iskaashiga shirkadaha iyo aasaaska, iskaa wax u qabso, iyo barnaamijyada isgaarsiinta. Jagadani waxay maamuli doontaa kooxaha horumarinta iyo suuqgeynta yaryar waxayna la shaqayn doontaa Agaasimaha Fulinta iyo Guddiyada Horumarinta iyo Suuqgeynta guud ahaan xeeladaha horumarinta iyo isgaarsiinta. Murashaxa guuleysta wuxuu noqon doonaa mid hal abuur leh oo ku raaxaysan isbeddel. Waxay ka koobnaan doonaan hab-ganacsiyeed, qaab-ku-saleysan natiijooyin iyo karti lagu garto laguna hirgeliyo hababka hal-abuurka ee horumarka.
Agaasimeheena Horumarinta ee xiga ayaa:
U hoggaami kooxda horumarinta si loo hubiyo isgaarsiin waqtigeedii la joogo oo waxtar leh deeq -bixiyeyaasha.
Qiimee xeeladaha iyo dadaallada lacag -ururinta ee hadda jira oo leh saldhigga deeq -bixiyeyaasha ee hadda jira si loo hagaajiyo bixinta internetka iyo fursadaha deeq -bixiyeyaasha oo dhammaaday.
Xiriirinta is -gaarsiinta deeq -bixiyeyaasha si loo xoojiyo ku -xirnaanta ururka.
Maamul qorshayaasha guud ee dhacdooyinka lacag ururinta gaarka ah iyo ka caawinta qorshaynta iyo fulinta dhacdooyinka deeq -bixiyeyaasha.
Hoggaami kooxda suuq -geynta si ay isugu -duwo isgaarsiinta dadweynaha guud, mutadawiciinta iyo qaatayaasha cuntada.
Toos istaraatijiyad isgaarsiineed oo dhammaystiran oo dhiirrigelisa shaqada iyada oo la dhexgelinayo farriimaha muhiimka ah agabka isgaarsiinta suuqgeynta, dhacdooyinka gaarka ah, iyo adeegsiga warbaahinta wararka.
La shaqee daneeyayaasha dibadda iyo iibiyeyaasha si kor loogu qaado astaanta Meals on Wheels.
Horumarinta iyo dabagalka miisaaniyadda waaxda si maareynta maaliyadeed ee habboon loo xaqiijiyo loona diyaariyo kheyraadka loo baahan yahay si loo gaaro ujeeddooyinka la go'aamiyay.
Maaree dhammaan hawlgallada kale ee waaxaha horumarinta iyo isgaarsiinta, oo ay ku jiraan hababka xafiiska, diyaarinta agabka wax -weydiinta, qirashooyinka, dayactirka diiwaangelinta, dabagalka xogta, iyo ka warbixinta.
Agaasimeheena Horumarinta ee soo socda ayaa keeni doona:
Xamaasad ku saabsan fursadda lagu hormarinayo ururka oo dhaliya koritaan.
A Shahaadada Bachelor -ka iyo a ugu yaraan saddex sanado horumarinta aan macaash doonka ahayn iyo suuqgeynta waayo -aragnimo.
Aqoon xooggan u leh mabaadi'da iyo dhaqannada lacag ururinta wax ku oolka ah.
Waxay muujisay guul iyo xamaasad u leh ku -biirinta iyo dhiirrigelinta deeq -bixiyeyaasha.
Awood u leh inuu u shaqeeyo si madaxbannaan, iskaashi iyo hal -abuur leh si loo xaliyo dhibaatooyinka.
Ogaanshaha shaqsiyaadka maxalliga ah, shirkadaha maalgelinta aasaaska.
Khibrad iyo/ama aqoonta Bixinta Qorshaysan.
Aad u fiican dadka dhexdooda, isgaarsiinta iyo abaabulka xirfado.
Experience oo leh xogta deeq -bixiyeyaasha (GiftWorks ayaa la doorbiday).
Agaasimaha Horumarintu waa mid waqti buuxa ah, oo mushahar qaata ($70,000-$80,000) wuxuuna u warbixin doonaa Agaasimaha Fulinta. Boosku wuxuu ku yaallaa Minneapolis, MN, xafiiskayaga.
Cuntada metrooga ee giraangiraha waxaa ka go'an inay shaqaaleysiiso oo kobciso shaqaale kala duwan oo loo dhan yahay oo ka faa'iideysanaya xirfadaha iyo kartida shaqaalaha oo dhan. Waxaan ku dhiirigelineynaa musharraxiinta u qalma inay codsadaan jagadan iyadoo aan loo eegin jinsiyadda, jinsiga, asalka qaranka, da'da, diinta, jihada galmada, awoodda jireed ama heerka dhaqan -dhaqaale.
Si aad u codsato, iimayl u dir Warqadda Dabool oo dib ugu celi [email protected] marka la gaaro Ogosto 10, 2021.